Dhageyso: Puntland oo ciidamo dirtay & xiisad sii kordheysa ayaga & S/Land - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Puntland oo ciidamo dirtay & xiisad sii kordheysa ayaga & S/Land
Dhageyso: Puntland oo ciidamo dirtay & xiisad sii kordheysa ayaga & S/Land
Garowe (Caasimada Online) – Cutubyo ka mid ah ciidamada daraawiishta dowladda Puntland ayaa la geeyey deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, gaar ahaan inta u dhexeysa magaalooyinka Ceerigaabo iyo Badhan ee gobolkaas.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon ayaa sheegay maanta oo jimce ah in dowladdu ay ciidamo gaysay deegaano ka tirsan gobolka oo uusan shaacin kuwa ay kala yihiin, balse uu ku sifeeyey xuduuda Puntland ee gobolkaas.
Wuxuu sheegay in ciidamadan ay ka hortegi doonaan dhaqdhaaqyo ay wado Soomaaliland, kuwaas oo ay ku jiraan in wefdi ka socda Hargaysa ay dhowaan tagaan magaalada Badhan.
Gudoomiye Ciyoon oo la hadlayey weriyaasha gudaha wuxuu tilmaamay in ay saaka kormeereen fariisimaha ciidamada dowladda ee gobolka Sanaag, wuxuu intaas ku daray in howlgalkan uu ka hortegi doono fara-gelin.
“dhuumashadii hore dowladdu talaabo ayey ka qaadi doontaa hadii alle yiraahdo.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Sanaag ee Puntland.
Dhageyso hadalka uu saxaafada gudaha siiyey Gudoomiye Ciyoon maanta oo jimce ah
Puntland ayaa si wayn uga carootay booqashadii madaxweynaha Soomaaliland uu ku tegay Laas-qoray toddobaadkii hore.